भजनसंग्रह2ERV-NE - अन्य - Bible Gateway
भजनसंग्रह 1भजनसंग्रह 3
भजनसंग्रह2Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)
2 अन्य राष्ट्रका मानिसहरू किन रिसाउँछन्?
किन तिनीहरू मूर्खतापूर्ण योजनाहरू बनाउँदै छन्?
2 तिनीहरूका राजाहरू र अगुवाहरू परमप्रभुको विरूद्ध
र उहाँले रोजेका राजाको विरूद्धमा युद्ध गर्न एकजुट भए।
3 ती अगुवाहरूले भने, “परमेश्वर र आफूले रोजेका राजाको विरूद्ध विद्रोह गरौं,
तिनीहरूबाट अलग हौं।”
4 तर मेरा स्वामी, स्वर्गका राजा ती मानिसहरू प्रति हाँस्नुहुन्छ।
परमप्रभुले तिनीहरूलाई हाँसोको पात्र बनाउनु हुन्छ।
5 तब परमेश्वर रिसाउनु हुन्छ,
अनि यसो गर्दा ती अन्य अगुवाहरू डराउँछन्।
6 अनि ती मानिसहरूलाई भन्नुहुन्छ, “यो मानिस राजा होस् भनी मैले रोजें।
अनि उसले सियोन पर्वतमा राज गर्नेछ।
सियोन मेरो एक विशेष पर्वत हो।”
7 अब म तिमीलाई परमप्रभुको करारको विषयमा भन्नेछु।
परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, “आज म तिम्रो पिता भएँ,
तिमी मेरा पुत्र भयौ।
8 यदि तिमीले माग्छौ भने, म तिमीहरूलाई यो देश दिनेछु
अनि पृथ्वीमा भएका सबै जातिहरू तिमीहरूका मानिसहरू हुनेछन्।
9 तिमीहरूले ती देशहरूलाई फलामको डण्डाले
माटोको भाँडाहरू टुक्रा पारे झैं नष्ट गर्न सक्ने छौ।”
10 यसैकारण, राजा र शासकहरू बुद्धिमान होउन्
र तिम्रा सम्पूर्ण शासकहरूले यो पाठ सिकुन्।
11 यसकारण एकदम डराएर परमप्रभुको आज्ञा पालन गर।
12 तिमीहरूले परमप्रभुको पुत्रको भक्त हुँ भन्ने देखाऊ।
यदि तिमीहरूले त्यसो गरेनौ भने उहाँ क्रोधित हुनुहुनेछ,
र तिमीहरू सबैलाई ध्वंश पार्नु हुनेछ।
जसले परमप्रभुमाथि विश्वास गर्छन् उनीहरू सुखी हुन्छन्।
तर अन्य मानिसहरू होशियार हुनु पर्नेछ।
परमप्रभु आफ्नो क्रोध देखाउन तयार हुनुहुन्छ।